Actorylọ ọrụ sistemụ windo Aluminom, Ndị na-eweta - China Ndị na-emepụta Aluminom Window windo windo
Ihe eji emechi uzo na uzo ikpeji
A na-eji profaịlụ aluminom anodized nke a maka otutu windo na ibo. Ihe eji eme ụlọ kacha mma. You nwere ike ịhazi profaịlụ nke anodized aluminom site na FOEN dị ala karịa ọnụahịa ndị ọgbọ.
A na-ere ngwaahịa ngwaahịa nke alumini a na-ere n'ụwa niile.Quality guarantee!
Igwe ọkụ Aluminom nke windo na-eme ka ikike ihu igwe nke alumini dị na ihu igwe site na usoro ịgbaze ikuku, usoro ntụ ntụ mmiri mmiri na-agagharị na ala aluminom, Nchekwa gburugburu ebe obibi, ahụike, mmetụ ahụ dị mma, Mee ka mmezi nke ikuku alumini na-eguzogide mmiri, iguzogide ntu oyi na iguzogide acid, mgbochi ihu igwe na-ebelata.
Ihe mkpuchi ma ọ bụ nke nwere ntụ na-egbukepụ egbukepụ nke na-egosi ụfọdụ ume ike ma na-atụgharị uche maka ndị ọzọ. Ihe ndị a na-ahọkarị na mbara igwe na-enwupụta ìhè na-ahụ anya ma na-egosipụta ụzarị ọkụ na-efe efe dị mkpirikpi.
Profaịlụ ụlọ ọrụ ọla ọcha ọlaọcha nke China Aluminom mere
Profaịlụ Njikwa Anodized Aluminom